နိုင်ငံရေး လွတ်လပ်မှု တရုတ်ထက် မြန်မာ ပိုရှိလာ | ဧရာဝတီ
လင်းသန့်| January 17, 2013 | Hits:1,390
3 | | မြန်မာနိုင်ငံသည် တရုတ်နိုင်ငံထက် နိုင်ငံရေး၊ လူမှုရေး လွတ်လပ်မှု ပိုရှိလာကြောင်း အမေရိကန်နိုင်ငံ ၀ါရှင်တန်မြို့ အခြေ စိုက် Freedom House အဖွဲ့က ယခုနှစ်အတွက် ထုတ်ပြန်သည့် အစီရင်ခံစာတွင် ဖော်ပြထားသည်။
Freedom House အဖွဲ့သည် ကမ္ဘာတလွှား နိုင်ငံများစွာတို့၏ နိုင်ငံရေး၊ လူမှုရေး လွတ်လပ်မှုများနှင့် ပတ်သက်၍ နှစ်စဉ် စစ်တမ်း အစီရင်ခံစာ ထုတ်ပြန်လေ့ရှိရာ ယခုနှစ်အတွက် ဇန်န၀ါရီလ ၁၆ ရက်နေ့က ထုတ်ပြန်သည့် Freedom in the World 2013 ဟူသည့် အစီရင်ခံစာ၌ ယင်းသို့ ဖော်ပြထားခြင်းဖြစ်သည်။
မြန်မာနိုင်ငံသည် တချိန်က ကမ္ဘာပေါ်တွင် အဖိနှိပ်ဆုံးနှင့် လွတ်လပ်မှု အနည်းဆုံး နိုင်ငံများစာရင်းတွင် ပါဝင်ခဲ့ပြီး ၂၀၁၀ ပြည့် ရွေးကောက်ပွဲပြီးနောက်ပိုင်း အစိုးရသစ်က ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးလုပ်ငန်းစဉ်များလုပ်ဆောင်ခဲ့သည့် အတွက် ယခင်က ထက် လွတ်လပ်မှု အဆင့် တိုးတက်လာသော်လည်း ယခုအထိ လွတ်လပ်မှု မရှိသေးသော နိုင်ငံဖြစ်နေသေးကြောင်းလည်း အစီရင်ခံစာက ဆိုသည်။
Freedom House ၏ စစ်တမ်းတွင် လွတ်လပ်မှု ရှိသည့် နိုင်ငံများ၊ တစိပ်တပိုင်းလွတ်လပ်မှု ရှိသည့် နိုင်ငံများနှင့် လွတ် လပ်မှု မရှိသေးသည့် နိုင်ငံများဟူ၍ သုံးမျိုးခွဲခြားပြီး ၂၀၁၂ ခုနှစ် ဇန်န၀ါရီလ ၁ ရက်နေ့ မှ ၂၀၁၂ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၃၁ ရက်အကြား တနှစ်တာ အတွင်း လေ့လာစောင့်ကြည့် စစ်တမ်းကောက်ယူ ထားခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ၏ နိုင်ငံရေးလွတ်လပ်ခွင့်နှင့်ပတ်သက်၍ အဆင့် ၇ ရှိရာမှ အဆင့် ၆ သို့ တိုးတက်လာခဲ့ပြီး လူမှုရေးဆိုင်ရာ လွတ်လပ်ခွင့်နှင့် ပတ်သက်၍ အဆင့် ၆ မှ အဆင့် ၅ အထိ တိုးတက်လာခဲ့သည်ဟု အစီရင်ခံစာက ဆိုသည်။
မှတ်ပုံတင်ခွင့် ပြန်လည်ပေးအပ်ခဲ့သည့်အတွက် နိုင်ငံရေးပါတီများ ၂၀၁၂ ခုနှစ် ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ ၀င်ရောက်ခွင့် ပေး သည့် အောင်မြင်သော ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု၊ နှစ်ပေါင်းများစွာ ကန့်သတ် ပိတ်ပင်မှုများ ပြုလုပ်ထားသည့် မီဒီယာ၊ ပုဂ္ဂလိက ဆွေးနွေးမှု၊ အများပြည်သူ လွတ်လပ်စွာ ဆန္ဒထုတ်ဖော် စုဝေးခွင့်၊ လူထုအခြေပြု လူမှုအဖွဲ့အစည်းများ ဖွဲ့စည်းခြင်း ၊ ပုဂ္ဂိလိ က လုပ်ငန်း လုပ်ပိုင်ခွင့်နှင့် အခြားသော လှုပ်ရှားမှုများအား ပိတ်ပင်တားမြစ်ခြင်းများကို ဖြေလျှော့ပေးမှုများ လုပ်ဆောင် လာခဲ့ပြီး တိုးတက်မှုများ ရှိလာကြောင်း အဆိုပါ အစီရင်ခံစာ၌ ဖော်ပြထားသည်။
Freedom in the World 2013 အစီရင်ခံစာ
ကမ္ဘာပေါ်ရှိ နိုင်ငံပေါင်း ၁၉၅ နိုင်ငံ ၏ နိုင်ငံရေး နှင့် လူမှု လွတ်လပ်ခွင့် ဆိုင်ရာ သုတေသန စစ်တမ်း ကောက်ယူမှုများ လုပ် ဆောင်ခဲ့ပြီး ယခုနှစ်အတွက် အစီရင်ခံစာတွင် နိုင်ငံပေါင်း ၉၀ ၌ တိုးတက်မှုများရှိလာကြောင်း၊ ၂၇ နိုင်ငံက ဆုတ်ယုတ်သွားခဲ့ကြောင်းလည်း Freedom House အဖွဲ့က ဆိုသည်။
အာရှ-ပစိဖိတ် ဒေသနိုင်ငံများအကြား မြန်မာ၊ အိန္ဒိယ၊ ကက်ရ်ှမီးယား၊ မွန်ဂိုလီးယားနှင့် တွန်ဂါနိုင်ငံတို့၌ လွတ်လပ်မှု ဆိုင်ရာ တိုးတက်မှုများ ရှိလာသော်လည်း မော်လ်ဒိုက်နှင့် သီရိလင်္ကာနိုင်ငံတို့တွင်မူ လွတ်လပ်မှုအဆင့် နိမ့်ကျသွားခဲ့ကြောင်းလည်း Freedom House အဖွဲ့ အစီရင်ခံစာ၌ ပါရှိသည်။
လွတ်လပ်မှု မရှိသေးသည့် နိုင်ငံပေါင်း ၄၇ နိုင်ငံရှိနေသေးပြီး အီရီထရီးယား၊ ဂီနီယား၊ မြေက်ကိုရီးယား၊ ဆော်ဒီ အာရေး ဗီးယား၊ ဆိုမာလီယာ၊ ဆူဒန်၊ ဆီးရီးယား၊ တာ့ခ်မန်နစ္စတန်၊ ဥဇဘက်ကစ္စတန်တို့မှာလည်း လွတ်လပ်မှုအဆင့် အနိမ့်ဆုံး နိုင်ငံများဖြစ်ကြောင်း၊ သီးခြား နယ်မြေဒေသ ၂ ခုဖြစ်သည့် တိဗက်နှင့် အနောက် ဆာဟာရ ဒေသတို့မှာ အဆိုးဆုံး အဆင့် စာရင်းတွင် ပါရှိနေဆဲဖြစ်ကြောင်း အစီရင်ခံစာက ဆိုသည်။
စစ်တမ်းအရ နိုင်ငံရေးနှင့် လူမှုရေး လွတ်လပ်မှု ဆိုင်ရာ ညွှန်းကိန်း ၂ ခုလုံး အဆင့် ၁ ရရှိသည့် နိုင်ငံများတွင် အမေရိကန်၊ ယူနိုက်တက် ကင်းဒမ်း၊ ဥရုဂွေး၊ ဆွီဒင်၊ ဆွစ်ဇာလန်၊ စပိန်၊ ဆလိုဗက်ကီးယား၊ ပိုလန်၊ ပေါ်တူဂီ၊ နော်ဝေ၊ နယ်သာလန်၊ နယူးဇီလန်၊ လူဇင်ဘတ် စသည့်နိုင်ငံများ ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ငြိမ်းချမ်းစွာစုဝေး စီတန်းလှည့်လည်ခွင့် မရရှိသေး
လူမှောင်ခို ကူးမှုအတွက် ထိုင်းစစ်တပ် အရာရှိ ၂ ဦးကို စစ်ဆေး
အာဆီယံ ဥက္ကဋ္ဌ မြန်မာကို စိန်ခေါ်မှုများက စောင့်ဆိုင်းနေ
2 Responses	LeaveaReply Cancel reply	Your email address will not be published. Required fields are marked *Comment Name * Email * Website ဗမာ January 18, 2013 - 8:53 am	နိုင်ငံရေး လွတ်လပ်မှု တရုတ်ထက် မြန်မာ ပိုရှိလာတယ်ဆိုတာ မှန်ကောင်းမှန်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမဲ့ တရုတ်ပြည်သူတွေဟာ မြန်မာပြည်သူတွေထက် (ယေဘုယျအားဖြင့်) အဆင့်အတန်းပိုပြီးမြင့်မြင့် နေနိုင်ကြတယ်ဆိုတာလည်း ငြင်းမရတဲ့အချက်ပါ။ တရုတ်က ကွန်မြူနစ်နိုင်ငံဆိုပေမဲ့လည်း သူတို့တရုတ်အစိုးရက ဟိုမရောက်ဒီမရောက်နဲ့ အသံကောင်းသာဟစ်တတ်တဲ့ အတ္တ၀ါဒီ၊မြန်မာစစ်အာဏာရှင် အစိုးရတွေအဆက်ဆက်ထက် ပြည်သူကိုဂရုစိုက်မှုက အပုံကြီးသာပါတယ်။
Reply	Shwe Linyone January 18, 2013 - 9:06 am	Washington must not compare Communist China to the Union of Burma. Burma is supposed to go along democratic path while Chinese communist leaders are leading the Chinese along communism. Comparing two different countries with the same measurement is unwise. China and Vietnam liberalize economically, but communism must not be questioned politically. Burma cannot go the same road with them because the Burmese public have been promised with democratic government. The government has no other choices than building Union of Burma in democratic way. Period.